Ngaba i-PSAT Matter? ("Ewe" - Funda isizathu)
Nangona i-PSAT ayinayo iMfuneko yokuMenyelwa kweNkqubo, iyakubandakanya
Ekuqaleni konyaka omncinci (iminyaka engama-sophomore kubafundi abathile), i-PSAT inika abafundi besikolo esiphakamileyo isilathiso sokuvavanya ngokufanelekileyo kweekholeji zamkelwa. Kodwa ngaba lo mbuzo umbuzo? Ngaba ufanele uthathe ngokungqongqo? Ingaba kukho into omele uyilungiselele ukuze wenze kakuhle? Eli nqaku lihlola imiba ejikeleze i-PSAT.
Ngaba iikholeji zikhathalele nge-PSAT?
I-PSAT ayisebenzisi ngqo ngqo kwiikholeji nakwiiyunivesithi xa benza iikholeji zabo zokwamkelwa kwezikolo.
Ukwamukelwa okanye ukugatywa kwakho kuxhomekeke ngakumbi kwi-SAT okanye UMTHETHO ngaphandle kokuba isikolo sivavanywe-ukukhetha okukhethwa kukho . Ngoko impendulo emfutshane "ayikho," iikholeji azikhathalele konke malunga ne-PSAT. Amanqaku afanelekileyo kwi-PSAT ayinayo nayiphi na impembelelo ngqo kwimingeni yokufikelela kwikholejini. Nangona kunjalo ...
Kutheni i-PSAT inenkalo:
Ngokuqinisekileyo ufuna ukugcina amanqaku e-PSAT ngembono. Amanqaku aphantsi aya kubonwa ngeekholeji, ngoko ke nangona ungenzi kakuhle awuzange ulimale amaninzi amathuba okufikelela kwikholejini eliphezulu okanye kwiyunivesithi . Oko kwathiwa, amanqaku anamandla kwi-PSAT anokufumana inzuzo ebalulekileyo:
Amanqaku akho kwi-PSAT asetyenziselwa ukunikezela ngeengxowa-mali ezininzi ezibandakanya malunga nee-7,500 zeeMali zoBuFundisa.
Ukuba u-National Merit finalist (okanye ngamanye amaxesha nokuba ngumgcini wokugqibela okanye umfundi oyanconywa), ezininzi iinkampani zisebenzisa le ntlonelo ukunikezela ngemfundo yabo yangasese.
Amakhulu eekholeji aqinisekisa ubungqina obongezelelweyo beMarit to National finalists.
Iikholeji ezininzi, ngomgudu wokukhangela abafundi abagqwesileyo kunye nokunyusa izibhengezo zabo, banikezela ngezibonelelo eziphambili zeziko (ngamanye amaxesha zize zikhulule izifundo) kwiiNational Merit finalists. Iimali zokugqibela zeMerit zifunyanwe ngokugqithiseleyo ngamakholeji.
I-PSAT ifana ne-SAT, ngoko uviwo luya kukunika uphawu olufanelekileyo lwenqanaba lakho lokulungiselela iSAT. Ukuba wenza kakubi kwi-PSAT, lo mqondiso ukuba kufuneka ulungelelanise ngaphambi kokuba uthathe i-SAT. Ukuba awukuhle ekuziphatheni, jonga ezi zikhetho ze-SAT zangaphambili ukusuka eKaplan .
Ebusika emva kokuba uthathe i-PSAT, iikholeji zizakuqala ukuthumela i-imeyli engafunekiyo. Ngelixa ezininzi zeeyili ziphela ekugqibeleni, kubalulekile ukubona ukuba iikholeji ezahlukileyo zizama ukwahlula njani. Iincwadana zekholeji zikwazisa ngolwazi olufanelekileyo ekuqikeleleni ukuba zeziphi iintlobo zezikolo ezinomdla kuwe, kwaye zeziphi izikolo ezinomdla kuwe.
Ukuphindaphinda umfanekiso wezezimali - ukuhlanganiswa kweeStockship Scholarship, i-scholarships, i-scholarships, kunye neenkxaso zekholeji zingazongeza ukuya kumawaka eedola
Ngokuqhelekileyo, ukuba ungumfundi obalaseleyo ngokwenene, kufuneka uthabathe i-PSAT ngokungathí sina ukuze ube ngummangaleli weeNational Merit Scholars. Kubafundi abaninzi, nangona kunjalo, ixabiso le-PSAT leprayimari lifana nje nokusebenza kwi-SAT.
Uqhagamshelwano lwe-Phatic Inkcazo kunye nemizekelo
Umtsha-no-Funa (uMtshakazi olahlekileyo)
Iintlanzi kwiiJamani zesiJamani